MAALMAHAYGII MUQDISHO – Bashiir M. Xersi
Posted on 27 Jan 2017 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
Muqdisho iyo dalkaba waxaan dib ugu laabtay dhawr iyo toban gu’ oon ka maqnaa ka dib. Hilow, jamasho iyo rabitaan badan ayaa gu’yaashii u dambeeyey igu jiray. Ayaan wanaag ugu dambayn garoonka Muqdisho ka dagay, dalkiina tagay. MAALMAHAYGII MUQDISHO
Alla maxay barqadaa boqraneed. Alla maxay cadceeddu ilaysneed! Alla muxuu jawigu wanaagsanaa. Alla muxuu dareenku raagnaa. Alla muxuu dhismaha garoonka qurxoonaa. Alla maxay dadku faraxsanaayeen. Alla maxay nolol iyo rabeen nooli. Alla…… Alla…. Alla…..
Wixii aan dareen, aragti iyo dhacdo ka qaatay intii aan Muqdisho joogay, hore ayaan uga qoray qormooyin taxan, marka hadda waxaan jeclaystay, in aan hal qoraal isugu geeyo, oo PDF ah, marka waa kane, ku soo dhawaada. MAALMAHAYGII MUQDISHO
Abaaraha dadka iyo ololaha doorashada!